Tater Tot Casserole - Fomba Fanamboarana
fahasamihafana eo amin'ny saosy taco sy saosy enchilada
sakamalaho akoho sy tongolo aendrika
inona no tompoinao amin'ny risotto
ahoana no mahandro trondro mainty
aiza no ahafahako mividy sandwich fromazy voaendy
resipeo fisotroana menaka fanosotra mangatsiaka miaraka amin'ny vodka
Tater Tot Casserole dia lovia mora mahavariana hatao ary tian'ny rehetra foana izany!
Sosona ny tater rehetra , hena sy legioma dia rakotra saosy tsotra ary nandrahoina mandra-pahafatiny sy hiboiboika. Mora, mahasosika ary oy mahafinaritra!
Ny ampahany tsara indrindra dia, ity tater tot casserole ity dia be dia be arakaraka izay ao anaty vata fampangatsiahana anao!
Tiako ny casseroles avy any Uncuffed Cabbage Roll Casserole ny Mac sy fraomazy an-trano , misy zavatra mampionona fotsiny momba ny sakafo mafana sy miboiboika mivoaka avy ao anaty lafaoro. Na dia tsy ity casserole Tater Tot mora ity aza no lovia tsara indrindra indrindra, dia tena mahafinaritra tokoa!
fomba fahandro amin'ny lasopy misy lasopy holatra
Amin'ireo dikan-teny rehetra any, dia heveriko fa ity no casserole Tater Tot tsara indrindra satria mora be ny miaraka nefa tena manome tsiro (tsara, ity ary mazava ho azy Meksikana Tater Tot Casserole ).
Manomboka amin'ny sosona tote tater eo am-pototry ny fahandro miadana (Mampiasà a 4QT CrockPot ho an'ity fomba fahandro ity), ary apetaho miaraka amina henan'omby voatoto. Mampiasa legioma mangatsiaka avy amin'ny frizera aho, izay midika fa tsy ilaina ny prep ary avy eo ambony miaraka amin'ny Tater Tots hafa.
Saosy haingana sy tsotra no asiana fromazy kely ary mahandro azy rehetra amin'ny fahalavorariana ao amin'ny CrockPot. Mora peazy ?!
Vantany vao masaka dia matsiro tanteraka ity Tater Tot Casserole ity ary mampatsiahy ahy pie trano (izay mitovy amin'ny Pie mpiandry ondry miaraka amin'ny hen'omby fa tsy zanak'ondry). Mahagaga ihany fa ny mahandro an'io ao anaty vata mangatsiaka dia mbola azonao ny poti-crusty eny amin'ny sisiny (izay iray amin'ireo faritra tiako indrindra).
Na dia mampiasa legioma mangatsiaka aza aho dia afaka mampiasa anana veggy amin'ity recette ity koa! Manamora izany ny mangatsiaka satria tsy mitaky fanomanana mialoha akory izy ireo, omeko kobanina haingana ao anaty saringan fotsiny izy ireo ary arotsako ao anaty vilany mangatsiaka. Raha mampiasa legioma vaovao ianao dia tsy ilaina alohan'ny handrahoana azy ireo, atsipazo kely fotsiny izy ireo ary mahandro miaraka amin'ny sisa lovia.
ny mandro sy ny vatana dia miasa indray mameno savony
Ny lovia iray manontolo dia hitondra anao ara-bakiteny minitra vitsy hametrahana ny anao mahandro miadana ary afaka mampiasa izay anananao eny am-pelatanana ianao! Nanisy henan'omby matavy sy legioma mangatsiaka ao anatin'ity tater tot casserole ity aho fa ampiasao ny ambin'omby, akoho na vorontsiloza mety anananao!
Raha matetika indrindra no mahandro izany amin'ny mpanendasa miadana, mazava ho azy Tater Tot Casserole azo amboarina amin'ny lafaoro ho tonga lafatra volamena koa. Apetraho fotsiny ao anaty vilany 9 × 13 ny soson'omby (na lovia casserole) ary apetaho amin'ny legioma avy eo Tater Tots. Afafazo fromazy sy saosy ary endaso amin'ny 400 ° F mandritra ny 30 minitra na mandra-pahatongan'ny volamena sy bubbly.
Ity Slass Cooker Tater Tot casserole mora ity dia sakafo feno ho azy fa matetika izahay dia manompo amin'ny salady maitso vaovao sy mofo misy crusty!
Fotoana fanomananaroa-polo amby minitra Fotoana fandrahoan-tsakafo3 ORA Fotoana manontolo3 ORA roa-polo amby minitra Fanompoana8 servings MpanoratraHolly Nilsson Namboarina tao anaty lafaoro miadana, haingana sy mora omanina ity sakafo hariva matsiro ity! pirinty Pin
▢1 kitapo Tater Tots manodidina ny 32 grama
▢1 farantsanao henan'omby mahia
▢1 tongolo kely diced
▢rOA kaopy legioma mifangaro vaovao na mangatsiaka
▢10 ½ ounces fanosotra lasopy holatra
▢1 kapoaka ronono
▢¼ sotrokely vovoka tongolo lay
▢1 sotrokely voantsinapy maina
▢sira sy dipoavatra hanandrana
▢rOA kaopy fromazy cheddar voatetika
Hen'omby sy tongolo vita amin'ny tany mena amin'ny hafanana antonony mandra-paha-tsy misy ambiny mavokely. Arotsaho izay tavy rehetra.
Afangaroy amin'ny lasopy ny lasopy, ronono, vovoka tongolo lay, voantsinapy maina sy sira ary dipay. Manokana
Apetraho ao anaty vilany tsy miadana 4qt ny antsasaky ny Tater Tots.
Omby sosona, legioma mifangaro, tavy tater sisa tavela ary fromazy ihany.
Arotsaho eo amboniny ny saosy, sarony ary andraho mandritra ny adiny 3-4 ambony na ambany 7 ora na mandra-pahafana.
Kaloria:348,Karbohidraty:12h,Proteinina:24h,Tavy:2. 3h,Tavy mahavoky:12h,Cholesterol:83levitra,Sodium:561levitra,Potasioma:407levitra,Fibre:rOAh,Sugar:1h,Vitamina A:2726IU,Vitamina C:6levitra,Kalsioma:309levitra,Vy:rOAlevitra
henan-kisoa voaendy miaraka amina lasopy holatra
Teny lakileTater Tot Casserole Mazava ho azysakafo hariva masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady mba jereo eto ny politikako momba ny fampiasana sary .
Avereno ity Super Casserole ity
Resipeo bebe kokoa tianao
Taco Tater Tot Casserole!
firy ny kaopy ataon'ny vary tsy masaka 1 kaopy
Slis Cooker Salisbury Steak